Waxaa qashinka iyo sida ay kuu caawin lahaayeen
Waxaa jira tobanaan kun oo sababaha lahaa oo uma oggolaanin user si loo hubiyo in qashinka ku Mac ama iDevice waxaa loo madhiyo oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican oo gobolka ka mid ah codsiga tahay waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira jidaynayey user si loo hubiyo in khayraadka nidaamka aan degan iyo natiijada ugu fiican ayaa waxaa sidoo kale ka helay sida codsiga waa in hoos xaalad kasta shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in Qashinka waxaa ka mid ah codsiga sida in hubiyaa in user helo ugu fiican iyo gobolka functionalities tahay marka ay timaado faaruqinta qashinka sida dadka isticmaala badan ayey ahayd mid ka mid ah arimaha u hubiso ka dhigi lahaa in user helo galay xasilloon dhib badanaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in codsiyada iyo farsamooyinka ugu wanaagsan waxaa sidoo kale codsatay in la hubiyo in qashinka ka dhammaatay waqtiga ma gudahood oo dhan. Qaybaha dambe ee tutorial tan ayaa sidoo kale u oggolaan doona in user si aad u hesho aragti qoto dheer oo ku saabsan mawduuca iyo in la hubiyo in codsiga waxaa loo isticmaalaa habka ugu fiican si loo hubiyo in user helo gobolka natiijo tahay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in codsiga ugu fiican ee nidaamka waa suurto gal oo keliya haddii farsamooyinka ugu wanaagsan ee lagu xusay tutorial waxaa raacay.
Under oo xaaladaha lahaa qashinka waxa loo isticmaali
Waxaa jira sababo badan oo ay ku raaxaysan codsigan cajiib ah oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in farsamooyinka la soo halkan ku xusan aan la mariyo uun hab ugu wanaagsan sameeyo, laakiin sidoo kale waa in ay la falanqeeyay si loo hubiyo in kuwa ugu wanaagsan ee lagu dabaqo iyo user helo natiijada hab xiddig. Waxa kale oo uu oggolaan in user si aad u hesho heshiis fiican ee dib u dhac kasta oo aan hubaa in user ayaa sidoo kale u falanqeeyaan xaaladda ka yar oo uu PC ama Mac been si ay xal ugu waa laga codsan karaa dhigi lahaa. Si aad u hubiso in user helo adeegga loo xirxiro ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in sababaha soo socda iyo tilmaanta la xiriira waxaa lagu bartay si fiican sameeyo:
1. Arrimaha in laga eryo Buuggan
Waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ay sabab u tahay taas oo qashinka waxaa la isticmaalo iyo sidoo kale waa in la xusay in laga eryo buuggan arrintan la xiriira labada fariisiyo ama aanu shaqayn haba yaraatee. Qashinka waxaa markaas ku rakiban sida uu samatabbixiye si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo aan wax arrin oo dhib.
2. Tirada alaabta in la tirtiro waa mid aad u ballaaran
Haddii ay arrintu sidaa tahay, waxay taasi keentaa in nidaamka inuu shil iyo in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Haddii tiro badan oo ah waxyaabaha qashinka ka dibna la tirtiray waxaa kale uu keenaa arimo oo laga adkaan karaa iyadoo la isticmaalayo codsiga qashinka waxaa ku
Sida loo isticmaalo qashinka waxaa
Geedi socodka la xiriira codsiga waa dhab fudud oo aan tiro badan oo ka mid ah tallaabooyinka ay ku lug leeyihiin arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in Screenshot la gundhig u ah geedi socodka ayaa sidoo kale eegay si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeeg tahay in la siiyo dadka isticmaala oo aan wax dhibaato ah u samayn. Geedi socodka sidoo kale waa mid fudud si loo fuliyo iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in hannaanka marna boodayo ah tallaabo kasta oo kaliya si aad u xaqiijiso in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay waxaa dib u dhac ku riyaaqay wax aan sameeyo. Waxaa sidoo kale ku taliyey in user ah waa in ay qaataan talo khabiir, haddii nidaamka u muuqataa in ay adag tahay:
1. gaarka ah goobaha ay tahay in la bedelay on Mac ah. Under Ammaanka iyo Privacy> General> ogolow barnaamijyadooda soo bixi> meel si aad u hubiso in codsiga la soo bixi:
2. Laga URL http://www.nonamescriptware.com/installation-and-usage/ user waa in la hubiyo in codsiga la soo bixi, rakibay oo bilaabay sameeyo:
3. Codsiga ka dibna waxaa lagu qabtaa in 32 hab yara oo la hubiyo in waxyaabaha qashinka waxaa lagu qabtay laftiisa oo sidaas daraaddeed waxaa sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in hannaanka ayaa ku dhameysatay kaalinta gebi ahaanba aan ka kaaftoomi wax ka dhigi doonaa. Icon qashinka ayaa sidoo kale noqon doona cagaaran:
Beddelka u qashinka
Waxaa jira codsiyo badan oo loo isticmaali karo sida kale si ay u qashinka iyo sidaas darteed waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay waxaa codsatay in arrintan la xiriira sameeyo. In tutorial taasi si kastaba ha ahaatee codsiyada ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo meel qashinka waxaa lagu xusay doonaa oo xusay ayaa sidoo kale hubin doona in sharaxaad ku saabsan codsiga waxaa sidoo kale la siiyey. Kuwa ugu badan 3-ada waa sida soo socota:
Gubi 1. Trash
Sidoo kale waa mid ka mid ah codsiyada oo la hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican udhigto in qashinka ku Mac iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in user marnaba wajahayo arrimaha la qashinka la mar kasta oo cuskaday. Geedi socodka la isticmaalayo fudud cirfiid codsigan oo si fudud looga heli karaa bogga internetka.
Codsiga qabow kale in la hubiyo in faaruqinta qashinka ma aha heshiis weyn oo dhan ka dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo macluumaadka ku saabsan file tirtiray dib u dhac kasta oo aan helo oo shaqadii la soo qabtay oo aan wax dhibaato ah.
3. qashinka Smart
Waa in la ogaadaa in codsigan waxaa lagu qiimeeyay sare by isticmaala sida ay waxa uu ahaa mid ka mid ah asaxaabta u khayroon kuwa u rajeeyay in ay hesho arrinta madhan qashinka loo xaliyay iyada oo arrin kasta oo dhan. La mid ah in laba kale oo codsiyada isticmaalka yahay si caddaalad ah oo fudud.
Fontographer u Mac
> Resource > Mac > Hagaha ugu fiican si ay u qashinka iyo sida ay kuu caawin lahaayeen